မ မှ မ ချစ် ရင် – Hlataw Entertainment
မ မှ မ ချစ် ရင်
July 17, 2021 By admin News
သူ ရတစ်ယောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်းကမှ ဗိုက်ထဲ က ဆာလာသလိုလိုဖြစ်လာသည်။ ပြန်တွေးကြည့်မိတော့ နေ့လည်စာစားပြီးကတည်းက အခုထိဘာမှမစားရသေး။ သူရ မမရွှေစင်ကို အားနာတာနဲ့ အဝတ်အစားလဲပြီးတော့ အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့သည်။ မီးဖိုခန်းထဲဝင်ပြီး ကြောင်အိမ်ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဘာမှမရှိ။ မီးဖိုဘေးနားက အိုးတွေကိုလှန်ကြည့်တော့ ထမင်းအိုးတစ်လုံး ချက်ထားတာပဲတွေ့သည်။ ဒေါ်လေးမြနှင်းဆီ သတိတရနဲ့ ထမင်းအိုးတစ်လုံး တည်သွားပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူရ ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်ကြည့်တော့ ကြက်ဥတွေ တွေ့သည်။ အသားခန်းထဲမှာ အေးခဲထားတဲ့ ဝက်သားတုံးကြီးတစ်တုံးတွေ့သည်။ အောက်ဆုံးထပ်က အသီးအရွက်အကန့်ထဲမှာတော့ ကန်စွန်းရွက်၊ ငရုတ်သီးနဲ့ အခြားတိုလီမုတ်စလေးတွေ တွေ့သည်။ အင်း…။ ရှိတာနဲ့ပဲ စားလို့ကောင်းအောင်လုပ်ရမှာပဲ။ သူရ အေးခဲနေတဲ့ ဝက်သားတုံးကြီးကို ဇလုံထဲထည့်၊ ဘေစင်မှာ ရေနဲ့ဆေးလိုက်သည်။ ဝက်သားကို အတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးပြီး ကြော်ရမည်။ သူရ ဂက်စ်မီးဖိုကို ဖွင့်လိုက်ပြီး မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်၊ ဆီထည့်ထည့်လိုက်သည်။ “မောင်…. ဟင်းချက်မလို့လား မောင်ချက်ရော ချက်တတ်ရဲ့လား မောင်ရဲ့.. မ ပဲလုပ်လိုက်ပါ့မယ် မောင်ရယ်” “မောင်ချက်တတ်ပါတယ်မမရဲ့ မ ပင်ပန်းနေတယ် မဟုတ်လား.. ခဏလေးပဲစောင့်” မမရွှေစင် သူရကိုပြုံးပြီးကြည့်နေသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ အကြည့်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း ၊ ကျေနပ်ခြင်း တို့နဲ့ ပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့သည်။
သူရလဲ မမရွှေစင်ကို အမြဲပဲပျော်အောင်ထားချင်ပါသည်။ “မမ…. အသားနဲ့ကပ်ကြော်ဖို့ ဂျုံမှုန့်ရှိလား” ဂျုံမှုန့် ရှိရင် ဝက်သားကိုရိုးရိုးမကြော်ပဲ ဂျုံမှုန့်နဲ့ကပ်ပြီး ဝက်စဥကြော်လုပ်စားမယ်လို့ သူရတွေးလိုက်သည်။ “ရှိတယ် မောင် ဒီမှာ” ရွှေစင် ဂျုံမှုန့်ထုတ်ကို ယူပြီး သူရနားသွားပေးလိုက်သည်။ သူရ ဂျုံမုန့်ကို ဝက်သားသေးသေးလေးတွေတုံးထားတဲ့ ဇလုံ ထဲထည့်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲက ကြက်ဥကို အလယ်ကခွဲ၊ အခွံနှစ်ခုကြားမှာ ကြက်ဥ အနှစ်လုံးလေးကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ပို့လိုက်တော့ ကြက်ဥအကာသပ်သပ်အနှစ်သတ်သတ်ရသည်။ ကြက်ဥအကာကို ဂျုံမှုန့်နဲ့ ဝက်သားနယ်တဲ့ထဲ ထည့်ရသည်။ အနှစ်ကိုပါရောထည့်ပြီးနယ်ရင် ကြော်လိုက်တဲ့ အခါ ဝက်စဥကြော်က ခဏလေးနဲ့ နီရဲပြီးတူးသွားတတ်သည်။ ဆားထည့် ၊ ငရုတ်ကောင်းမုန့်ထည့်ပြီး စောစောကတည်ထားတဲ့ ဆီပူပူမှာထည့်ပြီးကြော်လိုက်သည်။ စောစောက ဂျုံနယ်ရင်းဖောက်ထားတဲ့ ကြက်ဥအနှစ်လေး၂လုံးကိုပါ ဝက်သားကြော်ရင်း အိုးထဲမှာရောကြော်လိုက်သည်။ ဝက်စဥကြော်ကို ဆယ်ဖို့ မမရွှေစင်ကအလိုက်တသိနဲ့ ကြွေပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်လာပေးသည်။ သူရ ပန်းကန်လာပေးတဲ့ မမရွှေစင်ကို မျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ပြလိုက်ပြီး ” မောင့်ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲလား၊ ဟုတ်လား မမ” “မချစ်ပါဘူး ဒီက ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ ဟင်းချက်နေတာကို သနားလို့လာကူညီတာ လူကိုပြောင်ချော်ချော်နဲ့ လာစနေတယ်” မမရွှေစင်ပန်းကန်ကို သူရလက်ထဲ ထိုးပေးပြီး မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကာ ထွက်သွားသည်။ သူရ ဝက်သားလုံးကြော်ကိုဆယ်ရင်း ရယ်နေလိုက်သည်။ မမရွှေစင်က သူ့ကိုပြောင်ချော်ချော်နဲ့စရင်တော့ စိတ်ကောက်တတ်ပါသည်။
အကြာကြီးကောက်တာလည်း မဟုတ်ပဲ ဆူဆူအောင့်အောင့် လုပ်နေပုံက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သူရထင်သည်။ ဝက်သားကြော်ပြီးတော့ ကန်စွန်းရွက်ကို ကြက်သားမှုန့် ၊ ခရုဆီတို့နဲ့ အရေစပ်စပ်လေးကြော်လိုက်သည်။ ဟင်းချိုအဖြစ်ကတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတွေ့တဲ့ စွန်တန်ရွက်ခြောက်နည်းနည်းကို ယူ ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ဓားပြားနဲ့ရိုက်ပြီး ရေနွေးဆူဆူမှာ ကြက်သားမှုန့်ခတ်ကာ ထည့်ပြီး စွန်တန်ဟင်းချို လုပ်လိုက်သည်။ သူရ ဟင်းချိုကို ဟင်းရည်သောက် ကြွေဇလုံကြီးနဲ့ထည့်ပြီး စားပွဲပေါ်ချတော့ မမရွှေစင်က ထမင်းခူး၊ ဇွန်းတပ်ပြီး အဆင်သင့်စောင့်နေသည်။ သူရမပြောပဲ နဲ့ ငရုတ်သီးအချိုဆော့စ်ပန်းကန်လေးပါ အဆင်သင့်ထည့်ထားသည်။ သူရလည်း ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ထမင်းစားပွဲမှာ တစ်ခါထဲဝင်ထိုင်ပြီး စားလိုက်သည်။ သူရလက်ရာကို မြည်းပြီးတော့ မမရွှေစင်တစ်ယောက် တော်တော်ကြိုက်သွားပုံရသည်။ “မ တော့ ရည်းစားရွေးတာမှန်သွားပြီကွာ.. ရုပ်လဲချောတယ်၊ စာလဲတော်တယ်၊ ဟင်းချက်လဲ ကောင်းတယ် ဘာမှကိုမလိုတော့ဘူး” “ဟိုဟာလုပ်တာလဲ တော်တယ်မဟုတ်ဘူးလား မမရ” သူရ သူ့ အကျင့်အတိုင်း မမရွှေစင်ကိုစလိုက်သည်။ “မောင်မညစ်ပတ်နဲ့ကွာ.. ဒီမှာထမင်းစားနေတာကို” ရွှေစင် အမူပိုပိုနဲ့ပြောလိုက်သည်။ တကယ်တော့ သူရမေးတာကို ရှေ့ဆုံးကထားပြီး ပြောချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးဆိုတော့ အရှက်နည်းသလိုဖြစ်မှာ စိုးလို့မပြောတာပါ။ ရွှေစင် သူရနဲ့တွေ့မှ မိန်းမတွေ ဘာလို့ ယောက်ျားယူလဲဆိုတာ အပြည့်အဝ နားလည်ခဲ့ရသည်။ ရွှေစင် သူရလက်ရာကို စားလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်တာ ထူးထူးခြားခြား ထမင်းနှစ်ပန်းကန်ကုန်သွားသည်။ သူရနဲ့ အားရပါးရ ချစ်ခဲ့တာကြောင့် အင်နာဂျီတွေလောင်ကျွမ်းပြီး ဗိုက်တအားဆာနေတာကြောင့်လဲပါ ပါသည်။ ထမင်းစားပြီးတော့ သူရ ကပန်းကန်တွေသိမ်းသည်။
“မောင်မသိမ်းနဲ့ … စာသွားကျက်တော့လေ စာမေးပွဲနီးနေပြီ မဟုတ်လား ပန်းကန်တွေဆေးရမှာနဲ့ တလက်စထဲ မမပဲ သိမ်းလိုက်တော့မယ်” သူရ အိမ်ရှေ့က စာအုပ်သွားယူပြီး ထမင်းစားခန်းမှာပဲ စာထိုင်ကျက်နေလိုက်သည်။ ဘေစင်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း ပန်းကန်ဆေးနေတဲ့ မမရွှေစင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို သွားသွားကြည့်မိနေလို့ စာထဲမှာပဲစိတ်ကိုနှစ်ပြီးကျက်နေရသည်။ ပန်းကန်တွေဆေးပြီးတော့ တစ်ယောက်ခါး တစ်ယောက်ဖက်ရင်း မမရွှေစင်ရဲ့ အိပ်ခန်းကို သွားကြသည်။ သူရ မမရွှေစင်ရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စာကျက်နေလိုက်သည်။ မမရွှေစင်ကတော့ လက်တော့တစ်လုံးနဲ့ အလုပ်များနေသည်။ စာရင်းတွေရိုက်နေတာလား ၊ နိုင်ငံခြားက ဝင်လာတဲ့မေးလ်တွေ စစ်နေတာလားမသိပေ။ ည ၁၁နာရီကျော်တော့ မမရွှေစင် အလုပ်ပြီးလို့ လက်တော့ပိတ်လိုက်သော်လည်း မအိပ်သေးပဲ သူရ စာကျက်တာကိုထိုင်စောင့်ပေးနေသည်။ “မမ… အိပ်တော့လေ မနက်ဖြန်အလုပ်သွားရဦးမှာ မဟုတ်လား မောင်လဲ နောက်ထပ် ၁နာရီလောက်ကျက်ပြီးရင် အိပ်တော့မှာ” မမရွှေစင်ဘာမှမပြောပဲ သူရကို ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ပြီး စာကိုသာဆက်ကျက်ပါဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မေးကို ဆတ်ပြသည်။ သူရ မမရွှေစင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီး အသည်းယားလာတာနဲ့ ကျက်လက်စ စာအုပ်ကို ချထားပြီး မမရွှေစင်ရှိရာ ကုလားထိုင်နားကို သွားလိုက်သည်။ “အို့ … မောင်ရာ၊ စာကျက်ပါဆိုကွာ.. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” သူရ ၊ မမရွှေစင်ကိုပွေ့ချီပြီး ကုတင်ပေါ်ကို ခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။ အိပ်ပါဆိုတာကို တော်တော်နဲ့ မအိပ်ချင်တဲ့ မမရွှေစင်ကို အိပ်ဆေးတိုက်ရမည်။ …….. သူရ မျက်လုံးလေးဝိုင်းကာ ကြည့်နေတဲ့ မမရွှေစင်ကို ကုတင်ပေါ်ပက်လက်ကလေးတင်ပေးလိုက်သည်။ သူရ ညဝတ် ဂါဝန်ရှည်လေးဝတ်ထားသောမမရွှေစင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။
“အို့…. မောင်ရယ်… စာကျက်ပါဆိုကွာ” “ကျက်ပါတယ်မမရဲ့.. မမက မောင်စာကျက်လို့မရအောင် လှနေတာကိုး” “သွား… စကားတတ်တိုင်းလျောက်ပြောနေတယ် မြန်မြန်လုပ်နော် မမ ဟိုဟာလဲကျိန်းနေပြီ မောင်လုပ်ထားတာ” “ဒါဆိုလဲ မြန်မြန်ပဲလုပ်တော့မယ်နော်.. ခဏလေးပါ မရယ်” မမရွှေစင်ရဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကိုခါးအထိလှန်တင်လိုက်တော့ အတွင်းခံဝတ်မထားတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက ပေါ်လာသည်။ သူရ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို နာနာလေးလျက်ပေးလိုက်သည်။ အစိလေးကို ဆွဲစုတ်လိုက်တော့ မမရွှေစင် ထွန့်ထွန့်လူးသွားသလို အဖုတ်ထဲမှာလဲ အရည်ကြည်လေးတွေလဲ့လာသည်။ သူရ အချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားမှာတေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်လိုက်သည်။ အရည်အနည်းငယ် ထွက်ပြီးသားမို့ အခက်အခဲမရှိပဲ ဝင်သွားသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကားထားပြီး ခါးကို ဆွဲကိုင်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပင်လုပ်လိုက်သည်။ အောက်က မမရွှေစင်ကတော့ မျက်လုံးတွေမှေးစင်းပြီး ခပ်တိုးတိုးညည်းနေသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က အိပ်ရာခင်းကို ခပ်တင်းတင်းကိုင်ထားသည်။ အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆောင့်ပြီးတော့ မမရွှေစင်ရဲ့ အဖုတ်က အရည်တွေရွဲလာသည်။ သူရညီတော်မောင်ရဲ့ ဝင်သံထွက်သံ တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ ဆီးခုံချင်းရိုက်သံတစ်ဖောင်းဖောင်းက ခပ်မှန်မှန်ထွက်နေသည်။ ဂါဝန်ရှည်အောက်မှာ ဘာမှအခုအခံမဝတ်ထားတဲ့ မမရွှေစင်ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလည်း ဆွဲဆွဲချေလိုက်သေးသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ မမရွှေစင် အငမ်းမရကော့ကော့ပေးလာပြီး ပါးစပ်ကလဲ တရှီး ရှီးညည်းသံတွေထွက်လာသည်။ “အ… ခပ်မြန်မြန်လေးမောင်… မပြီးတော့မယ်…” သူရ ဆောင့်နေတဲ့အရှိန်ကိုထပ်မြင့်ပြီး ခပ်စိပ်စိပ်လေးဖိဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
“အ… မြန်မြန်…. ပြီးပြီ… …. အား….” မမရွှေစင်တစ်ယောက်အသံရှည်ထွက်ပြီး ကော့ပြန်သွားသည်။ “ကျွတ်…. အား… မောင်လဲ ပြီးပြီ….” အခန်းထဲမှာ ငြီးညူသံများအဆုံးမှာတော့ သူရ ညီတော်မောင်ကို မမရွှေစင်ရဲ့ အဖုတ်ထဲ တဆုံးမြုပ်ကာ လရည်များကိုပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သူရ ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့အရည်တွေက မမရွှေစင်ရဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ထိထိမိမိ ပင်ပန်းထုတ်မိသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားများကလဲ သူရရဲ့ အရည်တွေကို အငမ်းမရနဲ့ စုတ်ယူသည်။ သူရ ညီတော်မောင်ကို တစ်ချက်ချင်းညှစ်ရင်းအရည်တွေကုန်အောင် ညှစ်ထုတ်လိုက်ပြီး မမရွှေစင်ကိုယ်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်သည်။ မမရွှေစင်လည်း ရွှေရင်အစုံ နိမ့်တုံမြင့်တုံနဲ့ ဖြစ်နေသည်။ “ကဲ… မောင် … စာသွားပြန်ကျက်တော့.. မောင်လိုချင်တာပေးပြီးပြီ မမလဲအိပ်တော့မယ်” “အိုကေ…. မမ…..” မမရွှေစင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးတစ်စုံကို ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းစုတ်လိုက်ပြီး မမရွှေစင်ကိုယ်ပေါ်မှ လူးလိမ့်ထလိုက်သည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ ခါးအပေါ်ထိရောက်နေတဲ့ ညဝတ်ဂါဝန်ရှည်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချပေးလိုက်သည်။ “မမ ရေသွားဆေးမနေနဲ့တော့ တစ်ခါထဲ အိပ်လိုက်တော့နော်” သူရ ပြောရင်းနဲ့ တစ်ခါထဲစောင်ပါခြုံပေးလိုက်သည်။ အဲကွန်းအေးအေးမှာ စောင်ခြုံပြီးအိပ်ရတဲ့ အရသာကို သူရ ကြိုက်သလို မမရွှေစင်လဲ ကြိုက်နှစ်သက်မည် ထင်ပါသည်။ သူရ လဲ နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက် စာဆက်ကျက်ပြီး အိပ်ဖို့ ပြင်သည်။ မအိပ်ခင် တစောင်းနေအထားနဲ့ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတဲ့ မမရွှေစင်ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလှလှကို ခပ်ကြာကြာလေးငေးကြည့်နေမိသည်။ “ချစ်လိုက်တာမမရယ် ” သူရ ခပ်တိုးတိုးလေးရေရွတ်ရင်း မမရွှေစင်ရဲ့ပါးလေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းပြီး အိပ်ယာဝင်လိုက်သည်။
အိပ်ယာပြောင်းတာကြောင့်လားမသိ။ သူရ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ပေ။ သိပ်မကြာခင် စာမေးပွဲဖြေရမည်။ စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာဌာနကလွှတ်တဲ့ နယ်မြို့တစ်မြို့ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာရမည်။ အဆင်ပြေပါ့မလားမသိ။ သူရအဖို့ မမရွှေစင်နဲ့ ခွဲရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေမည် မထင်ပါ။ ရည်းစားဖြစ်တာမှမကြာသေး မမရွှေစင်နဲ့ ခွဲရဦးမည်။ ကွင်းဆင်းလို့ပြီးပြီးချင်း ကျောင်းတစ်လပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ရမည်။ အိပ်ပြန်ရင်း တစ်ခါထဲအိမ်ကိုကားဝယ်ခိုင်းဖို့ စဉ်းစားထားသည်။ ‘ဘာကားဝယ်ရပါ့လိမ့်…. ပြိုင်ကားဝယ်ခိုင်းရမည်’ သူရလိုချင်တဲ့ကားနာမည်တွေကို စဉ်းစားရင်းပဲ ခေါင်းတွေမူးနောက်လာပြီး အိပ်ပျော်သွားသည်။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ သူရတစ်ယောက် မမရွှေစင်နဲ့ မန္တလေးမြို့အနှံ့အစားအစာတွေလျောက်စားဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲနီးတာကြောင့် သူရ ကျောင်းမသွားတော့ ပဲ မမရွှေစင်အိမ်မှာပဲ ကုပ်ပြီးစာကျက်ဖြစ်သည်။ မမရွှေစင်ကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်းအလုပ်သွားပို့ ၊ သွားကြိုဖြစ်သည်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက သူရတစ်ယောက် ကျောင်းမသွားတာနဲ့ စားဖိုမှုးတာဝန်ကို လုံးလုံးလျားလျား ယူဖြစ်တာပဲဖြစ်သည်။ မမရွှေစင်အတွက် နေ့လည်စာကို ထမင်းချိုင့်နဲ့ထည့်ပြီး သွားပေးရသည်။ အချိန်ဆိုသည်မှာ စိတ်ဆင်းရဲနေသူများအတွက် ကုန်ခဲလွန်းသော်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ရသူတွေအတွက် အချိန်ကုန်တာ မြန်လွန်းလှသည်။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် အချိန်တွေ ကုန်လာလိုက်တာ သူရစာမေးပွဲဖြေတဲ့ရက်ကို ရောက်လာသည်။ မမရွှေစင် အလုပ်မအားတဲ့ကြားက သူရကို ဂရုတစိုက်ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို လုပ်ပေးရှာသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ အပြုံးတစ်ချက်က စာမေးပွဲဖြေပြီး ပင်ပန်းလာတဲ့ သူရကို အမောတွေပြေစေသည်။ စာမေးပွဲပြီးတော့ သုံးရက်လောက်သာခြားပြီး သူရ ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရပြန်သည်။ ခရီးမထွက်ခင် သုံးရက်လုံးလုံး တစ်ချိန်လုံးလိုလို မမရွှေစင်နဲ့ ချစ်ဖြစ်သည်။
အသားဖြူဖြူ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တောင့်နဲ့ မမရွှေစင်ကို သူရ ကုတင်ပေါ်မှာတစ်မျိုး၊ စားပွဲစောင်းမှာကုန်းပြီး တစ်ဖုံ အမျိုးမျိုးလုပ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်လေ မမရွှေစင် ရေချိုးနေတုန်း ရေချိုးခန်းတံခါးခေါက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲမှာပဲ အားရပါးရချစ်ဖြစ်သည်။ ညဘက် တီဗီကြည့်ရင်းလည်း ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ချစ်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ရိုးမသွားနိုင်နဲ့ မမရွှေစင်ကို သူရ တိုးတိုးပြီးသာချစ်နေမိသည်။ သူရ ခရီးထွက်ခါနီး နောက်ဆုံးည မမရွှေစင် သူရ ရင်ခွင်ထဲမှာ အိပ်ရင်းမျက်ရည်တွေဝဲနေတာတွေ့သည်။ ”မမရယ် … ဘာလို့ ငိုတာလဲဟင်” မမလေ… မောင့်ကိုမခွဲနိုင်ဘူး မောင်သာ တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပါသွားရင် မမတော့ရူးမှာပဲ သိလား” ”အို.. မမရယ် မောင်က ဘာလို့တခြားမိန်းကလေးနဲ့ ပါရမှာလဲ.. မောင်ပြောပြီးသားပဲ.. မ က မောင့်အတွက် တစ်ယောက်ထဲသော အချစ်ဆုံးမိန်းကလေးပါဆိုနေ.. မငိုရဘူးကွာ… တိတ်တော့…” သူရ မမရွှေစင်ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာစီးကျနေတဲ့ မျက်ရည်လေးတွေကို ဖွဖွလေးသုတ်ပေးရင်း ချော့ပေးနေမိသည်။ သူရလဲ မမရွှေစင်နဲ့ ခွဲရမှာမို့ဝမ်းနည်းပါသည်။ ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာထက် ငိုချင်သလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ပိုမှန်မည်ထင်သည်။ သူရ ယောက်ျားတစ်ယောက်မို့ မငိုချင်ပါ။ သူရသာ ငိုလျှင် မမရွှေစင်တစ်ယောက်ပိုပြီး ခံစားရမှာဖြစ်သည်။ သူရ ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ကို ချုပ်တီးပြီး မမရွှေစင်ကိုသာ ပိုဂရုစိုက်ပြီး ချော့နေလိုက်သည်။ အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်း ကုန်ဆုံးလာသည်။ သူရ ခရီးထွက်ရတော့မည်။ ညနေငါးနာရီကားနဲ့ သွားရမည်။ သူရ အဆောင်ပြန်ပြီး အထုတ်အပိုးတွေ ပြင်ဆင်ရသည်။ မမရွှေစင် အထုတ်အပိုးတွေကိုကားနဲ့ တင်ပြီး သူရ ကားထွက်မဲ့ ဆုံရပ်ကိုလိုက်ပို့သည်။
ကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘာစကားမှ မပြောဖြစ်ပဲ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ မုန်တိုင်းမလာခင် ငြိမ်သက်နေခြင်းမျိုးလားမသိပေ။ သူရ ကားမောင်းရင်း မမရွှေစင်ရှိရာ Lover seat ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့ မမရွှေစင်ကား မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုငေးကြည့်နေသည်။ မမရွှေစင်ရဲ့ မျက်နှာက ညိုးရော်နေသည်။ မျက်ဝန်းတွေက အရင်လိုအရောင်မတောက်ပဲ ခပ်မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေသည်။ ရွှေစင် သူရမောင်းတဲ့ ကားပေါ်လိုက်စီးရင်း ကားမောင်းနေတဲ့ သူရရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးခိုးကြည့်မိသည်။ ရွှေစင် စိတ်ထဲမှာအရမ်းငိုချင်နေသည်။ သူရ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း သူရရဲ့မျက်နှာလှလှကို ကြည့်ပြီးငိုရသည်မှာအမော။ ရည်းစားဖြစ်ပြီး နှစ်ပတ်လောက်ပဲတွဲရသေးချိန်မှာ နှစ်လလောက်ခွဲရတာ မို့ သူရနဲ့မခွဲချင်သေးတာလည်း ပါသည်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အတူတူသွားရမဲ့ ခရီးလည်းဖြစ်တာမို့ သူရနဲ့ ရွယ်တူကောင်မလေးတွေ ညိသွားမှာလည်းစိုးရိမ်မိသည်။ ရွှေစင် အတွေးတွေ လွန်နေတုန်း ကားထိုးရပ်သွားမှ သူရတို့ အဖွဲ့သားတွေ ဆုံဖို့ချိန်းထားတဲ့ ဆုံရပ်ကို ရောက်နေတာတွေ့ရသည်။ တူညီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံနေကြသူများထဲမှာ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေပါတာ တွေ့တော့ရွှေစင့်ရင်တွေပိုပြီး ပူလောင်လာသည်။ ”မမ… ဆင်းလေ” သူရ ကားတံခါးလာဖွင့်ပေးရင်းပြောသည်။ ရွှေစင် ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဘာမှမပြောနိုင်သေးပဲ သူရမျက်နှာကိုသာ ခပ်တွေတွေစိုက်ကြည့်မိသည်။ ရွှေစင့် မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်တွေဝဲနေမည်ဆိုတာ ရွှေစင်ကိုယ်တိုင်လည်း သိပါသည်။
”မမရယ်.. ဘာလို့ငိုတာလဲ.. နှစ်လလောက်ပဲ ဟာကို သင်္ကြန်ပြီးပြီးချင်းပြန်လာခဲ့မယ်.. ဟုတ်ပြီလား” ”အင်းပါ.. မ ဆီ ညတိုင်း ဖုန်းဆက်နော် မောင်.. ပြီးတော့ တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့လည်း ပူးပူးကပ်ကပ် မနေရဘူးသိလား” နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ကလေးလေးလို တွတ်တီးတွတ်တာ ပြောနေသော မမရွှေစင်ကို ကြည့်ရင်း သူရ အချစ်တွေပိုလို့နေမိသည်။ ”အော်… မက အဲဒါကို စိတ်ပူနေတာကိုး ဟားဟား… အပျိုကြီးတော်တော်ကြွေနေတယ်ဟုတ်လား” သူရ မမရွှေစင် စိတ်မပူအောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ပြန်ဖြေပေးလိုက်သည်။ ”မောင်နော်… အမြဲတမ်း အဲလိုပဲ.. ကပျက်ကချော်နဲ့.. မ ကအကောင်းပြောတာကို” ”အယ်.. မောင်လည်း အကောင်းပြောတာပဲလေ.. အပျိုကြီး ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ရေလည်ကြွေပြီး စိတ်တွေပူနေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်လို့လား” ”တော်ပြီကွာ မောင်နဲ့ ယှဉ်ပြောတိုင်း မ ဘယ်တော့မှ မနိုင်ဘူး သွားတော့မယ် လိမ်လိမ်မာမာနေ၊ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်…ဘိုင်…. မောင်…” ”ဘိုင်… မမ” သူရ နှုတ်ဆက်ရင်း ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လက်မနဲ့ လက်သန်းကို နားမှာကပ်ပြီး ဖုန်းပြောတဲ့ ဟန်လုပ်ပြလိုက်သည်။ မမရွှေစင် ကားကိုမောင်းထွက်ရင်း တာ့တာပြသွားသည်။ သူရ မမရွှေစင်ကားကို မျက်စိအောက်က ပျောက်သွားတဲ့အထိ မျက်စိတစ်ဆုံး လိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ဟူး….။ ချစ်ရတဲ့ မမကြီးနဲ့ လပိုင်းလောက်ခွဲရဦးမည်။ မမရွှေစင်သူ့ကိုလွမ်းသလို သူရလည်း ခရီးလမ်းတစ်လျောက်လွမ်းနေမှာပဲ ဖြစ်သည်
အ ရမ်း နာ နေ လား